Kaftanka COVID -ga ee Moscow Subway Lands Video Blogger ee Xabsiga Ruushka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Kaftanka COVID -ga ee Moscow Subway Lands Video Blogger ee Xabsiga Ruushka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Safarka Tareenka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Saraakiisha fulinta sharciga ayaa sheegay in Dzhabarov uu si ula kac ah “uga xanaaqay argagax” nidaamka gaadiidka, xilli warka COVID-19 uu ku faafay Shiinaha iyo meelo kaleba uu bilaabay inuu ku dhufto cinwaannada iyo darnaanta iyo astaamaha cudurka oo aan si fiican loo fahmin.
Kaftan taxaddar la'aan ah ayaa sababay in metrooga Moscow uu qaylo dhaan geliyo.
Karomat Dzhaborov ayaa lagu helay dambi ah in uu yahay hooliganism.
Qofka wax ku qora blogga ayaa lagu xukumay 28 bilood oo xabsi ah.
Maxkamad ku taal Ruushka ayaa ku xukuntay nin wax ku qora cajaladaha fiidiyowga ee Tajik 2 sano iyo 4 bilood oo xabsi ah Subway Moscow bishii Febraayo ee sanadkii hore, markii uu iska dhigay inuu “qof u dhintay” cudurka coronavirus oo uu ku gariiray dabaqa baabuurka ee tareenka dhulka hoostiisa mara, taasoo keentay in rakaabkii kale ay qaylo dhaan u diraan.
Karomat Dzhaborov ayaa garsoore ku sugan caasimadda Ruushka ku helay dambiga nacaybka isniintii, taas oo ay ka duubeen saaxiibbadiis markii cabsida laga qabo fayraska soo baxaya ay hadda uun bilaabatay. Stanislav Melikhov iyo Artur Isachenko, oo isaga la socday xilligaas, ayaa labaduba lagu xukumay labo sano oo xarig ah.
Fiidiyowga, oo lagu daabacay kanaalkiisa 'Kara Prank' ee Instagram -ka, Dzhaborov waxaa lagu arki karaa isagoo ku turunturoodaya baabuur metro oo buuxsan oo dhulka ku dhacaya. Marka rakaabka ay khusayso u soo gurmadaan si ay u caawiyaan, wuxuu bilaabayaa inuu gariirayo oo cunaha cunayo sidii isagoo suuxdin qaba. Qof ku jira fiidiyowga ayaa markaa ku qeylinaya “coronavirus,” isagoo diraya rakaab isaga ka cararaya.
Booliisku waxay xireen kalkaaliyaha dhowr maalmood ka dib, markii ay soo baxday inuu cinwaan khaldan siiyay baarayaashii, waxaa lagu hayey xabsiga horudhaca dacwada. Dacwad oogayaasha ayaa markii hore doonayay in xabsi afar sano ah lagu xukumo muwaadinka Tajikiga ah.
Saraakiisha fulinta sharciga ayaa sheegay in Dzhabarov uu si ula kac ah “uga xanaaqay argagax” nidaamka gaadiidka, xilli warka COVID-19 uu ku faafay Shiinaha iyo meelo kaleba uu bilaabay inuu ku dhufto cinwaannada iyo darnaanta iyo astaamaha cudurka oo aan si fiican loo fahmin. Waqtigaas, kaliya laba kiis oo fayras ah ayaa laga diiwaangeliyay Ruushka, laakiin 6.21 milyan oo qof ayaa tan iyo markii si rasmi ah u tijaabiyey togan.